प्रम ओली र घटाटोप | रुपान्तरण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीलाई पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भेट्न चाहेको ६ महिना नाघिसक्यो । भेट्न नपाएपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले कोरोना भाइरसले उत्पन्न स्वास्थ्य संकट र जनजीविकाको सवालका विषयमा बैठक गर्न एजेण्डा सहित पत्र लेखे । सचिवालय सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठको पत्र प्रधानमन्त्री ओलीले डस्टविनमा फ्याँके ।
पार्टी अध्यक्ष र प्रवक्ताबीच ६ महिना लामो संवादहीनताले सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान अवस्थाको चित्रण गर्छ । प्रधानमन्त्री ओली बैठक बोलाउन रुचाउँदैनन् । पार्टीका शीर्ष नेता मिलेर बैठक गरेमा त्यसलाई गुटगत भेलाको संज्ञा दिन्छन् । आफू निकट नेतासँग जुम मिटिङ गर्छन् । नेता, कार्यकर्तालाई विभाजन तर्फ डोर्‍याएकाछन् । पार्टीलाई अकमण्र्यता तर्फ धकेलेका छन् ।
झण्डै दुई तिहाई मत पाएर बनेको सरकारको गतिविधि निरासाजनक छ । बैठकमा नीतिगत, बैचारिक छलफल समेत नगर्दा पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्री ओली आलोचित भइरहेका छन् । यो सरकारलाई इतिहासकै कमजोर, अनुत्तरदायी र अयोग्य सावित हुन दुई वर्ष पनि लागेन । कोभिड शुरु भएयता प्रवक्ता श्रेष्ठले पटक पटक भेट गर्न माग गरे । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भेट गर्नै रुचाएनन । बैठक गर्नै रुचाएनन । जनादेशप्रति गम्भीर बनेनन ।
चौध वर्ष जेल बसेका प्रधानमन्त्री ओली जनमुखी देखिएनन । राजनीतिक परिवर्तन एवं उपलब्धिलाई सामाजिक र र्र्आिर्थक क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकेनन । उनीले आपूmलाईउखान तुक्केका रुपमा उदाहरणीय बनाएका छन् । गफाडीको छवि बनाएका छन् । आफनो परिचय हास्यपात्रका रुपमा खडागर्न सफल भएका छन् । आम जनता मात्र होइन सिंगो पार्टी पंक्तिमा निरासा बाँडन सफल भएका छन् । एकाधिकारवादी कार्यशैलीका नायक बनेका छन् । व्यक्तिवादी, गुटवादी नेताका रुपमा देखा परेका छन् ।पार्टी एकता भाँड्ने जोखना हेरिरहेका छन् ।पार्टीको निर्णय लागू नगर्ने र बैठक पनि नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको मनशाय देखिन्छ ।
सरकार संचालनका दुई वर्षको अवस्था हेर्दा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली पूर्णरुपले असफल देखिएको घाम जत्तिकै छर्लंङ्ग छ । पार्टी एकता सुदृढ हुँदै जानु पर्नेमा उल्टो दृश्य देखिएको छ । घरभित्र झगडा चम्काएर आफै रमिते बन्ने क्रममा लागेका छन प्रधानमन्त्री । पार्टीमा विधि र पद्धति कोपभाजनमा परेको छ । ‘बिनास काले विपरित बुध्दि’ जसरी स्वार्थमा केन्द्रीत छन् सरकारका नेताहरु ।
बेसार पानी खाए कोरोना ठीक हुन्छ भन्ने हावादारी कुरागर्ने ओलीको बोली हाँसो र ख्यालठट्टाका रुपमा लिइन्छ । आफ्नै अभिव्यक्ति हावादारी भएको पुष्टि भएपछि जन-स्वास्थ्यविज्ञ डा. समिरमणि दीक्षितको सल्लाहमा प्रधानमन्त्री ओली मौन रहे । कोरोनाको नियन्त्रण एवं रोकथाममा लागि विज्ञहरुसँग छलफलमा डा. दीक्षितले बेसार पानी खाए ठिक हुने तर्क वैज्ञानिक नभएको बताउँदा प्रधानमन्त्री ओली नाजवाफ बने । बोले पछि मात्रै सोच्ने स्वभावका प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै जवाफ दिएनन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीले पटक पटक पदीय गरिमाको अवमूल्यन भएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो सन्देश प्रवाह गर्दा जनमानसमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? यसको ख्याल कसले गर्ने ? सल्लाहकारहरु अरिंगाल कार्यकर्ताको तहमा झरिसकेका छन् । सही सल्लाह कसले दिने ? जनताबीच मात्र होइन पार्टी र कार्यकर्तामाझ समेत ओलीको बोलीले विवाद खडा गरेको छ ।
४ मंसिर २०७६ मा कमरेड प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा पार्टीको काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्डको प्रस्तावमा कमरेड ओलीले पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको रुपमा सरकारको काममा केन्द्रित रहने निर्णय उल्लंघन भएको थियो । तर, ओलीले आफू १ नम्बरको कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेको घोषणा गरेर त्यो निर्णयको अवज्ञा गरे । यससँगै अध्यक्ष प्रचण्डका विरुद्ध गुटबन्दीको आरोप लगाए। प्रचण्डको तेजोवध अभियान शुरु गरे । राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा अनेकौं पटक फितलो देखिए । विदेश मामिला र कूटनीतिमा हदैसम्मको अयोग्यता र अक्षमताको प्रदर्शन गरे ।
भारतीय गुप्तचर संस्था र का प्रमुख विशेष दूतका रुपमा नेपाल आएको समयमा कूटनीतिक आचार संहिता पालना गरिएन । र का प्रमुखलाई विशेष दूतका रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाएको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले एयरपोर्ट आएर पो थाहा पाएँ भन्ने जस्तो हास्यास्पद र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसको संस्थागत जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत दिइएन । दुई देश बीचको राजनीतिक र कुटनीतिक सम्बन्धलाई जासुसी वा सैनिक संयन्त्र मार्फत डिल गर्न खोजेको त होइन ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । यसले राष्टिय स्वभिमान र कुटनीति ओजमा ह्रास ल्याएको छ ।
त्यस्तै भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालको भू-भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा प्रकाशितगर्न पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट प्रस्ताव पारित गरी दिइएको निर्देशनलाई समेत प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन गरेनन ।
प्रधानमन्त्री ओली न त प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिन चाहन्छन् न त, पार्टी अध्यक्ष पदबाट । उनले अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति तथा अवसरको वितरण आफू निकट गुटलाई दिलाउनु छ । सरकारी ढुकुटीमा रमाइरहेका ओलीले पार्टीमा एकलौटी रुपमा कब्जा जमाउने र त्यसो गर्न नसकिए छुट्टै पार्टी खोल्नेयोजना बनाएको कतैबाट छिपेको छैन ।सचिवालयमा पनि ‘फुटाउ र राज गर’ को नीति अख्तियार गरिरहेका छन। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया जनाउने सञ्चारमाध्यमलाई पाठ पढाउन उद्यत छन् । यसैलाई भन्छन-घटाटोप ।